स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ है चाउमिन-पिज्जा ! | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ है चाउमिन-पिज्जा !
२०७५, २९ मंसिर शनिबार २३:०३
कतिपय मानिसहरु घरमा बनेको खानेकुरा भन्दा बजारमा भेटिने ‘रेडी टु इट फुड’ को शौखिन हुन्छन् । बजारमा पाइने मोनो सोडियम ग्लुटामेटको सेवन बढी मात्रामा गरिरहेका हुन्छन्। मोनो सोडियम ग्लूटामेट अर्थात एमएसजी स्वास्थ्यका लागि कति खतरनाक छ भन्ने धेरैलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ। प्याकेटमा ‘नो एडेडे एमएसजी’ को लेवल देखेर कतिपय मानिसहरु यसलाई सुरक्षित मान्छन तर त्यसमा पनि मोनो सोडियम ग्लूटामेटको मिसावट हुन्छ ।
एमएसजीको प्रभाव :
किन हानीकारक छ एमएसजी :
एमएसजीको प्रकृति नशाजस्तो हुन्छ । एकपटक एमएसजीयुक्त खाद्यपदार्थ खाएपछि बारम्बार यही खान मन लाग्छ ।
एमएसजीको सेवनले शरीरमा इन्सुलिनको मात्रा प्रभावित हुन्छ । त्यसैले यसले टाइप २ डाइबिटिजको खतरालाई बढाउँछ ।
एमएसजीको सेवनले आँखाको ज्योती प्रभावित हुन्छ र तपाईंको रेटिनामा असर गर्न सक्छ ।
यसको सेवनले मुटुको धड्कन बढ्नुका साथसाथै मुटुसम्वन्धी तमाम रोगहरुको सम्भावना बढ्छ । यसका अलावा छातिको दुखाई पनि हुन सक्छ ।
एमएसजीयुक्त पदार्थहरुको अधिक सेवनले मोटोपनाको सम्भावना बढ्छ । बच्चाहरु र युवाहरुमा मोटोपानाको एउटा ठूलो कारण फास्टफुड्स र प्याकेज्ड फुड्समा प्रयोग हुने एमएसजी पनि हो ।
एमएसजीले हाम्रो शरीरको न्यूरोन्सलाई पनि प्रभावित गर्छ । त्यसैले यसको लगातार सेवनले हाम्रो दिमागी क्षमतामा पनि प्रभाव पर्छ । एमएसजीयुक्त पदार्थहरुको सेवनले अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स जस्ता मस्तिष्कका रोग पनि हुन सक्छन् ।
एमएसजीयुक्त पदार्थहरुको सेवनले बाँझोपना पनि हुन सक्छ किनकी यसको प्रयोगले गर्भमा रहेको बच्चालाई भोजन पुर्‍याउने नली प्रभावित हुन्छ । यसबाट भ्रुणको विकास नै हुन पाउँदैन ।एमएसजी मिसाइएको आहारा खाँदा रक्तचाप बढ्नुका साथै मुटु रोगको सम्भावना पनि बढ्छ ।यसको लगातार प्रयोगले माइग्रेनदेखि टाउको दुख्ने समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।
Previous articleअखबारमा राखेका खानेकुरा खाँदा बढ्छ क्यान्सरको जोखिम
Next articleजाडोको समयमा कालो चिया ? यस्ता छन् फाइदा !